အကယ်ဒမီ ပန်းဖြူနှင့် ဇော်ဝင်းရှိန်တို့၏ ဇာတ်လမ်းမှ ဓာတ်ပုံများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အကယ်ဒမီ ပန်းဖြူနှင့် ဇော်ဝင်းရှိန်တို့၏ ဇာတ်လမ်းမှ ဓာတ်ပုံများ
အကယ်ဒမီ ပန်းဖြူနှင့် ဇော်ဝင်းရှိန်တို့၏ ဇာတ်လမ်းမှ ဓာတ်ပုံများ
Posted by True Faith on Jul 15, 2010 in Myanma News | 8 comments
အင်တာနက်မှာ ပျံ့နေတဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာ စာသားသက်သက်ကို ဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က လင့်ခ်ကျန်ခဲ့လို့ ဖြည့်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီမှာလည်း နောက်တခုတွေ့ပါတယ်။ အီးမေလ်းကရတဲ့စာလို့ဆိုပါတယ်။
အင်တာနက်က စုထားတဲ့ သတင်းတွေရယ်။ ရထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေရယ် ၊ စာဖတ်သူတွေ ပေးထားတဲ့ကွန်မန့်တွေရယ်ပေါင်းလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သတင်းတပုဒ်ဖြစ်လာပါတယ်။ သတင်းမှာရထားတဲ့အချက်အလက်တွေပဲထည့်ပြီး ကိုယ့်အယူအဆ၊မှတ်ချက်ထည့်မထားရင် ဘက်မလိုက်တဲ့ သတင်းကောင်းဖြစ်တာပါပဲ။
သတင်းဆိုတာ အဲဒီလိုပဲ ရှာဖွေစုဆောင်းရပြီး။ သူများမှတ်ချက်တွေ၊ မေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေ ယူပြီး ရေးရတာမဟုတ်ပါလား..။
တနေ့တော့ သတင်းရေးသူတွေလည်း ကိုယ်ပိုင်မူနဲ့ ကိုယ်တိုင်သတင်းရေးနိုင်ကြပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မန္တလေးဂေဖက်ကလည်း သတင်းတင်သူတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပေးနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဖြစ်ကြပြန်ပြီ…. သူတို့ကလည်း တစ်မျိုး…..
ဖြစ်လဲ သူသိရှင်ကြား ကွဲကြလဲ လူသိရှင်ကြား
ဘဲကြီးကိုလည်းဘာမှမပြောချင်ဘူး။ မမပန်းဖြူကိုလည်း ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ ဘာမှမပြောချင်တာက ပြောလည်းမထူးလို့လေ။ မမကို သနားတယ်။ ဘဲကြီးက တယုတ်ဘဲကြီးဆိုလို့မုန်းတယ်။ အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကို မှ သွားယုံကြည်တဲ့မမပန်းဖြူကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရင်မုန်းလိုက်ချင်တယ်။ အယုတ်ကြီးကလည်း လုပ်တိုင်းဖြစ်နေ တော့ သူ လည်းလေလောကီလူသားပေမို့။ သင်ခန်းစာယူကြ။ ဟိဟိဟိ။
Mr Big Tort says:
ပန်းဖြူဆိုတာ တိမ်တြားကြီး နဲ့ကလေးတစ်ယောက် ထွက်ထားပြီးသားလေ ….တိမ်ကြားကြီး မော်စကို အောင်းနေတုန်း စမောဆွဲတာနေမှာပေါ့ … Sponsor လိုတယ်လေဗျာ …. ဟော …အခု တိမ်တြားကြီး ပြန်ထွက်လာတော့ရှုတ်ကုန်ပြီပေါ့ …အဖြစ်က ဒါပါပဲ .. မိန်းမတွေက လည်း ရီရတယ် နော် … ကုန်းတော့လည်း သူတိူ့ ပဲ … ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လုပ်ပေးပါလို့ တောင် တောင်းဆိုတတ်ကြသေးတာ ….ထွီ …. တရားပြန်စွဲတော့လည်း သူတို့ ပဲ … ဘာကောင်းလဲ … THAS ရေ … တယုတ်က အမှုတ်တော့ ကောင်းတယ်ကွဲ့…… ခံကြည့် ပါလား …